I-Sea Breeze Holiday Chalet, eduze nolwandle olunesihlabathi.
I-Sea Breeze iyindawo yokulala enamakamelo angu-2 ye-chalet retreat (ilala 4) enendawo yangaphakathi ethandekayo, indawo yokupaka elula - uhambo olufushane nje oluya emabhishi anesihlabathi.
Esizeni esiphumuzayo, esihle esiphethwe umndeni - kuyindawo ekahle yeNorfolk Lavender Farm, Sandringham House, Park Farm deer park, ukubuka izinyoni nokuhamba ngomkhumbi eSnettisham.
Jabulela izinsuku zokuya e-Hunstanton, iKing's Lynn yomlando, iCromer & Norwich.
Vakashela ugu olukhazimulayo lwaseNyakatho Norfolk - Holkham, Cley & Wells-next-the-Sea.
Uxolo, azikho izinja esizeni.
I-Sea Breeze inoveranda, ipulani elihle elivulekile langaphakathi elinekhishi elisanda kufakwa, izihlalo ezithokomele, imibhede emibili / emincane ephindwe kabili nemisebenzi yobuciko.
I-chalet icwebezelwe kabili.
Inomlilo kagesi endaweni okuhlala kuyo enkulu, iheater ebekwe odongeni endlini yokugezela kanye nama-2 ama-convector heater kagesi.
Ukulala kushintshwa ukuze kube nesikhathi sonyaka.
Ifakwe i-TV, okokulala, ukukhetha okuhle kwebhulakufesi, imihlahlandlela yezivakashi nezinto ezibalulekile.
Izivakashi zingapaka mahhala endaweni yokupaka izimoto eseduze kakhulu ne-chalet.
Sicela uqaphele ukuthi ayikho i-WiFi ku-chalet.
IHeacham North Beach iwumphakathi osolwandle othule eduze kwaseHunstanton ogwini lwaseNorfolk.
I-Chalet yeholide ye-Sea Breeze isendaweni enotshani ebiqhutshwa umndeni ofanayo iminyaka eminingi. Awekho ama-clubhouse anomsindo noma izindawo zokudlala zezingane. Izinyoni ezifudukayo zindiza phezulu ziye endaweni yokulondoloza i-RSPB e-Snettisham.
I-Heacham ilungele ukuhamba ogwini lwayo olunesihlabathi sasendaweni, izindlela zezinyawo ezinqamula amaxhaphozi nangasemfuleni.
I-Heacham iyisisekelo esingabizi kakhulu sokuvakasha ugu olukhethekile lwaseNyakatho Norfolk - oluqala e-Old Hunstanton - edume ngamaxhaphozi awo anosawoti wasendle, ukuhamba ngomkhumbi, izindawo zokudlela ezinenkanyezi yaseMichelin, iBurnham Market, izindawo zemibukiso yezobuciko kanye neHolkham Beach ehlonishwayo ezuze imiklomelo.
• I-Rose & Crown – Old Church Rd, Snettisham, PE31 7LX. Izinja zamukelekile (amabha nengadi).
Ababungazi batholakala ngefoni.
Ngiyajabula ukuza ngizosiza uma kudingeka.